Waxaan tijaabinay LG Optimus G | War gadget
Waxaan tijaabinay LG Optimus G
In kasta oo ay suuqa ku jirtay dhawr bilood haddana ay durba bilaabeyso inay ka hadasho beddelkiisa, casriga LG Optimus G ayaa sii wadaya inuu muujiyo in qalabkeedu aanu wakhtigiisu dhicin Maya. Caddaynta tan waxaynu haynaa laga bilaabo daqiiqadda ugu horreysa ee aan bilaabayno inaan la macaamilno terminaalka, innagoo muujinayna mar walba dheecaanno ay moobiillo yar ku faani karaan maanta.
Dembilaha in LG Optimus G uu yahay mid dareera waa pSnapdragon S4 Pro processor afar-geesle ah kaas oo ku shaqeeya inta jeer ee 1,5Ghz. The 2GB oo RAM ah waxay sidoo kale gacan ka gaystaan ​​inay ku raaxaystaan ​​tiro badan oo codsiyo furan ah iyada oo aan nidaamka wax dhib ahi soo gaadhin.
Ka dib markaan ku tijaabino qalabkaaga qalabka Antutu, waxaan aragnaa taas LG Optimus G ayaa ku jira xagga sare ee boosteejooyinka ugu awoodda badan Android oo waxaa kaliya ka sarreeyaa boosteejooyin casri ah sida Samsung Galaxy S4, Xperia Z, HTC One iyo, in yar, Google's Nexus 4.
Marka lagu daro muujinta awoodda ceyriin, LG Optimus G waxaa sidoo kale lagu calaamadeeyay heer sare Muuqaal 4,7-inji ah oo leh TRUE HD IPS + guddi. Xaglaha daawashadu waa kuwo cajiib ah oo xallinta 1280 × 768 pixels ayaa in ka badan ku filan si loo gaaro cufnaanta pixels halkii inji oo ah 318. Sida aynu nidhaahno, tayada muuqaalka ee ka muuqda shaashadda taleefanka casriga ah ayaa ah mid aad u wanaagsan, kuna faanaya midabbada qaarkood oo dhalaalaya taas oo ka dhigaysa wax walba qurux badan.
Caqli ahaan, oo leh shaashad cabirradaas oo kale ah, cabbirka barta ayaa lagu go'aamiyaa muujinta. LG Optimus G ayaa cabirkiisu yahay 131.9 × 68.9 × 8.5 milimitir culeyskiisuna waa 145 garaam. Tani waxay nagu qasbeysaa isticmaal terminaalka labada gacmood Ilaa aynaan haysan gacmo waaweyn sida kiiskeygu yahay, xitaa sidaas oo ay tahay, maxaa yeelay dusha sare waa wax sibiibix ah, waxaa lagugula talinayaa inaad hal gacan ku qabato inta aan tan kale ku qabaneyno
Haddii aan ka hadalno naqshadda xarunta, LG Optimus G wuxuu muujinayaa khadad miyir leh laakiin aad u qurux badan. Wejiga hore wuxuu soo bandhigayaa si siman oo dhammaad madow ah marka shaashadda la xiro. Shaxda dhinaca waxay leedahay lahjadaha xoogaa chrome ah gadaalna wuxuu leeyahay a muuqaal dhalaalaya oo leh qaab dhibic kala duwan iyadoo kuxiran dhacdooyinka iftiinka. Guud ahaan, LG Optimus G waa mid aad ugu raaxeysanaya isha iyo taabashada, in kasta oo ay waliba aad u jecel tahay faraha.
Heerka software-ka, taleefanka Waxay ka timid warshadda leh Android 4.1.2 waxayna leedahay taxane howleedyo ay LG lafteeda ku darsatay taleefankan si uu uga dhigo mid dhammaystiran. Tusaale ahaan, QuickMemo waxaan ku qori karnaa wakhti kasta oo aan ku shaqeyn karnaa terminaalka caadiga ah inta aan aragno waxa aan ku qornay asalka. Markaad sameyneyso fiidiyow waxaan codsan karnaa dhaweyn ah ilaa 5x iyo qaadashada sawirada waxaa lagu sameyn karaa meel fog iyadoo la adeegsanayo caawinta kaliya ee codkeena iyo ku dhawaaqida erayga muhiimka ah si loo kiciyo kiciyaha.
La 2.100 mAh baytariga ayaa ku filan inuu soconayo maalin shaqo, Had iyo jeer ka hadla isticmaalka caadiga ah. Shaashaddu way ballaadhan tahay oo guddigeeda dhalaalaya ayaa ku xisaabtamaya inta badan isticmaalka. Waxaa jira qaab Eco ah oo aan u habeyn karno sida aan u jecel nahay oo si otomaatig ah u joojineysa shaqooyinka qaarkood ee taleefanka.
Ugu dambeyntiina, qeybta sawirka ayaa sidoo kale xusid mudan. The kamarada gadaal waxay leedahay 13 megapixel sensor waxaana weheliya iftiin yar oo LED ah daqiiqadahaas oo dhalaalka deegaanku ku yar yahay. Kaamirada hore waa 1,3 megapixels, oo ku filan in lagu duubo fiidiyowga 720 oo leh wicitaano fiidiyoow oo tayo wanaagsan leh.
Maanta, Optimus G weli waa terminal lagu xisaabtamo haddii aan raadineyno waxqabad iyo tayo, intaa waxaa sii dheer, dhaafitaanka bilaha ayaa sababay in qiimaheeda uu hoos u dhaco haddana waxaa laga iibsan karaa dukaamada qaarkood wax ka yar 400 euro, oo ah sawir aad u duufsan.
Macluumaad dheeraad ah - Beddelka LG Optimus G wuxuu ku socon karaa jidka
Xiriir - LG Optimus G
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Waxaan tijaabinay LG Optimus G
Halo 4 waxay lahaan doontaa Champions League bisha Ogosto
20 magacyada ugu caansan Facebook